VaTsvangirai Vanoti Sarudzo Dzichaitwa Gore Rinouya
Chivabvu 11, 2010
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanoti vari kutarisira kuti kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, kunge kwapera gore rino, kuitira kuti kuitwe sarudzo gore rinotevera. VaTsvangirai vakataura mashoko aya neMuvhuro vasati vatambira mubayiro we W. Averell Harriman Democracy Award, uyo vakapihwa nesangano reNational Democratic Institute.
Vachitaura nevatori venhau muWashington DC, VaTsvangirai vakati hurumende yemubatanidzwa yava nemari yekushandisa pakunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika.
VaTsvangirai vakati vane chivimbo chekuti referendum yekubvunza veruzhinji kuti vanotambira here kana kuti kwete zviri mubumbiro ranyorwa, ichaitwa gore rino risati rapera, uyezve kuchazoitwa sarudzo gore rinotevera.
Asi komiti yeparamende iri kutungamira hurongwa hwekunyorwa kwebumbiro idzva inoti referendum iyi, ichaitwa mugore rinouya.
Vachitaura pamusoro pemakakatanwa aripo pakati peMDC neZanu PF muhurumende yemubatanidzwa, VaTsvangirai vakati ivo vava kutarisira kuti SADC iite musangano mukuru wekuzeya nyaya iyi.
Mashoko aVaTsvangirai mu Washington, anopesana nemashoko avakataura kumusangano we World Economic Forum ku Tanzania svondo rapera, uko vakati zvinhu zviri kufambira mberi zvakanaka muhurumende yemubatanidzwa.
NeMuvhuro VaTsvangirai vakatiwo vava kutarisira kuti mubati wehomwe mubato ravo, VaRoy Bennett, vachatoreswa mhiko yekuva mutervedzeri wegurukota rezvekurima nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuitira kuti vatange basa ravo. VaBennett vakawanikwa vasina mhosva yavanga vachipomerwa nehurumende.
Vatsvangirai vakataura mashoko aya vasati vapinda mumabiko esangano re national democratic institute apo vakapihwa mubayiro wekuremekedza kodzero dzevanhu, we w. Averell harriman democracy award.
Vachitaura pamabiko aya, VaTsvangirai vakakurudzira nyika dzepasi rose kuti dzibatsire Zimbabwe kuti ibudirire zvisinei nekuti VaMugabe vachiri muhutongi.
Vakatenda hurumende yeAmerica nekutora matanho ekuvandudza mutemo weZimbabwe Economic and Democracy Recovery Act. VaTsvangirai vakati kuvandudzwa kwemutemo uyu kuchabatsira kusimudzira kudyidzana kweZimbabwe neAmerica.
Zvichakadaro, VaTsvangirai vari kusangana nenhengo dzedare reparamende muAmerica, idzo dzinosanganisira Senator John Kerry, Jonny Isakson, Russell Feingold nevamwe. Mushure mezvo, vachasangana zvakare nezvipangamazano zvemutungamiri weAmerica, VaBarack Obama mubazi re National Security Council, Michelle Gavin na Nicole Willet.
NeMuvhuro mangwanani, VaTsvangirai vakaitawo hurukuro negurukota rinoona nezvekunze kweAmerica, Amai Hilary Clinto. VaTsvangirai vari kudzokera kumusha neChipiri.